vhura sosi bvunzo manejimendi maturusi
Kuru Qa Vhura Chinyorwa Bvunzo Yekushandisa Maturusi
Vhura Chinyorwa Bvunzo Yekushandisa Maturusi
Vhura sosi uye Mahara Bvunzo Management maturusi. Pano isu tasarudza yepamusoro yepamusoro yakavhurwa sosi bvunzo manejimendi maturusi. Ivo vakasununguka kurodha pasi uye kushandisa mumapurojekiti ako.
Test Management maturusi akakosha kwazvo kune chero bvunzo timu. Bvunzo dzezvikwata dzinoshandisa maturusi aya kubatsira kutora zvinodiwa, dhizaini yekuyedza kesi, mepu bvunzo kesi kune zvinodiwa, bvunzo dzekuuraya mitezo uye zvimwe zvakawanda. Makambani anogona kushandisa imwe kune akawanda maturusi eizvi, ayo anotangira pane anodhura kwazvo kuvhura sosi. Zano rangu raizove rekutora chishandiso chinogona kusangana nezvakawanda zvawazvino uye padyo nezvinodiwa zvenguva yemberi.
Pazasi pane runyorwa rweyakasununguka uye yakavhurwa sosi bvunzo manejimendi maturusi ayo anogona kuuya anobatsira.
Klaros-Testmanagement inoratidzira zvinhu zvekuronga, kuita uye kuongorora bvunzo uye inotsigira zvinodiwa kufukidzwa pamwe nekukurumidza nzira dzekuvandudza seScrum kana Kanban.
Mafaira ekuburitsa ekuteedzera masystem, bvunzo otomatiki maturusi uye anoenderera ekubatanidza maseva anotendera isina musono kusangana mune yako budiriro nharaunda.
Yakavakirwa-mukuburitsa kugona inotsigira kugadzirwa kwemishumo yega yega yeongororo yakakwana yemhedzisiro yekuedzwa.
Iyo software yekuyedza kesi manejimendi yekuwedzera yeBugzilla. Iyo yakagadzirirwa kunge iri generic chishandiso chekutevera bvunzo kesi, ichibvumidza kuyedza masangano kusanganisa bug kuburitsa neyavo ebvunzo kesi anomhanya mhedzisiro. Kunyangwe iyo yakagadzirirwa ne software kuyedza mupfungwa, inogona kushandiswa kuteedzera kuyedza pane chero chinhu chiri muinjiniya maitiro.
qaManager ipuratifomu yakazvimirira yewebhu-yakavakirwa kunyorera yekugadzirisa QA MaPurojekiti zvinobudirira nekumisikidza kuri nyore. qaManager ine Project yekutevera, Resource Management, TC Management, Online Raibhurari, Alerts uye zvimwe. Iyo Inofambiswa neOpenXava.
Kunyorera Radi-testdir ndeyehuremu-huremu bvunzo bvunzo Management turu. Radi inotsigira bvunzo dhairekitori maficha sekumisikidza iyo bvunzo chirongwa, kugadzirisa (gadzira / gadzirisa) iyo bvunzo mhedzisiro yemuyedzo mufananidzo / kuvaka, Backup, Mushandisi Management.
Chishandiso chewebhu-chakavakirwa kubata zvinodikanwa, bvunzo, mhedzisiro, uye zvikanganiso mukati mehupenyu hwese hwekushandisa. Icho chishandiso chinopa nzira yakarongeka yekuyedza software uye inowedzera kuoneka kweyekuyedza nzira nekugadzira yakajairika dura yezvinhu zvese zvekuyedza zvinosanganisira zvinodiwa, bvunzo kesi, bvunzo zvirongwa, uye bvunzo mhedzisiro.
Kwayedza Nyaya Webhu (TCW) iri pamhepo TCM system yakavakirwa nePHP uye SQL kumashure-kumagumo. Iyo inopa nzira inoshanda yechizvarwa, kurongeka, uye kuuraya kuzivisa kwezviitiko zvekuyedza pakati pemapurojekiti uye nevanoyedza uye neshanduro. Inopa akasiyana pa-e-e-maonero maonero eiyo bvunzo suite yeyakareruka mamiriro ekumisikidza uye bvunzo suite kufamba. TCW zvakare inopa yakakosha yekuzivisa kugona uye neepro-projeki yekuwana kutonga.
Webhu-based manejimendi uye bvunzo yekumisikidza system inobvumira QA zvikwata kuti zvigadzire, maneja, kuitisa uye kuteedzera bvunzo kesi uye nekuzvironga muzvirongwa zvekuyedza.
Yemahara 100% graphical uye modular mune dhizaini bvunzo manejimendi application inobata izere hupenyu-kutenderera kweako QA / mapurojekiti ekuyedza kubva kumagumo kusvika kumagumo: vashandisi, zvinodiwa, zvirevo, zvirongwa zvekusimudzira (scrum yakanangidzirwa), SUTs, bvunzo, bvunzo zvirongwa, mishumo yekuyedza, uye mishandirapamwe yekuyedza.
Ndokumbira utaure pazasi pane ako mafungiro / ruzivo pane chero eakavhurika sosi bvunzo manejimendi maturusi akanyorwa pamusoro uye / kana kana iwe uchiziva chero chimwe chishandiso chinofanira kuwedzerwa.
bvunzo zano gwaro template yemaitiro agile
maitiro ekugadzira faira muJava
Inguva yakareba sei kudzidza kune ceh
Linux Bvisa Mafaira uye maDhairekitori
Maitiro Ekutungamira Akawanda Akawanda GitHub Maakaunzi pane Iwo Mashini
JMeter Pass Zvinosiyana Pakati PeMapoka Mapoka
Mashandisiro ekushandisa iyo SQL Drop, Truncate uye Delete Statement
Bvunzo Sarudzo uye Bvunzo Chirongwa
Nei maQA maneja Asingadiwe muAgile Projects
Software Kwayedza Zvakakosha - Mibvunzo neMhinduro
Chidimbu cheZita uye Kuwana manejimendi (IAM) uye Anopa Provider (IdP)
Maitiro Ekuparadzanisa JSON Mhinduro uine REST-yakavimbiswa